Fanka:- Heesaaga Caanka ah Hindiya Lata Mangeshkar oo geeriyootay | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Fanka & Suugaanta Fanka:- Heesaaga Caanka ah Hindiya Lata Mangeshkar oo geeriyootay
Fanka:- Heesaaga Caanka ah Hindiya Lata Mangeshkar oo geeriyootay
Sunday, February 06, 2022 Bulshada , Fanka & Suugaanta
Bulsha:- Lata Mangeshkar, oo ka mid ah hal-doorka dhaqanka ugu weyn Hindiya, isla markaana ahayd heesaa qeexday muusigga iyo laxanka jiilalka Koonfurta Aasiya, ayaa geeriyootay iyada oo 92 jir ah.
Mangeshkar waxaa la dhigay isbitaal 11-kii Janaayo ka dib markii uu ku dhacay COVID-19, sida uu sheegay Dr Pratit Samdani, waxayna ku geeriyootay maanta Isbitaalka Mumbai’s Breach Candy Hospital.
Si wadajir ah iyada iyo walaasheed ka yar Asha Bhonsle – oo ah xidig weyn, ayaa fanka Bollywood-ka gacanta ku haysay in ka badan nus qarni waxaana dad badan ay u haystaan ​​inay ahayd fannaanka ugu weyn fanka Hindiya.
Waxa ay ku dhalatay Maharashtra Sebtembar 28, 1929, Mangeshkar waxa ay markii ugu horreysay ka heesi jirtay kulamo diimeed aabaheed Deenanath, oo isna ahaa heesaa tababaran.
Ka dib markii ay u guurtay Mumbai, caasimadda aflaanta India, waxay noqotay xiddig caan ah oo soo jiidasho leh, ku soo jiitay daawadayaasha codkeeda macaan
Mangeshkar waxa uu ku luuqeeysay in ka badan 5,000 oo heeso ah in ka badan 1,000 aflaan oo Bollywood ah, waxa u dheeraa duubista albamka cibaadada iyo kuwa qadiimiga ah.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Hindiya ayaa sheegtay in Mangeshkar ay heli doonto aas qaran dowladduna ay ilaalin doonto, baroordiiqda qaran ee calanka oo ay weheliyaan shaqaalaha kala bar illaa Isniinta.